အာဏာရှင်ရဲ့အခွန် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
September 22, 2006, 3:27 pm Filed under: Tax တကယ်ပဲရှင်..ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီညတောင်အိပ်ရပါ့မလားမသိဘူး. ဒါပေမယ့် အတိုချုန်းပြောမယ်… ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ပြည်ပရောက်ရင် မြန်မာသံရုံးနဲ့ကင်းကွာလို့မရပါဘူး.. ဘဘကြီးတွေကို သိပ်ချစ်လွန်းတော့ နှစ်စဉ်အခွန်ဆက်သရပါတယ်.. ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာက အခွန်သွင်းရတဲ့စာရွက်ပါ.. သူတို့က ကောက်ခံသလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ မြန်မာလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုချစ်လွန်းလို့ လာရောက်ဆက်သရတဲ့ပုံစံမျိုး `ကျေးဇူးပြုပြီးအခွန်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါရန်´ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကို မြင်လိုက်ရတော့ ခေါင်းတစ်ချက်ညိတ်မိပါတယ်.. သံဝေဂရလို့ပါ.. လက်တစ်လုံးချားလိမ်တာတော့ တကယ်ကို ချီးကျူးထိုက်ပါတယ်.. အခွန်ဆိုတာ မိမိတိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းရာမှာအသုံးပြုနေတယ် ၊နိုင်ငံတော်အတွက် ၊ နောက် ပြည်ပကမြန်မာတွေကိုလည်း လူလိုဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်တောင် ပေးရတာ လက်မတွန့်ပါဘူး.. အခုတော့ အခွန်လည်းပေးရသေး.. တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ ကြောက်ရလွန်းလို့ ထိုင်ရှိခိုးမတတ် ပြောရသေးတယ်.. အရင်တုန်းကများ ဆက်ဆံရေးက အခုထက်ထိပိုဆိုးသေးရှင့်… `ခင်ဗျားတို့အခွန်အလုပ်တင်မဟုတ်ဘူး တခြားအလုပ်တွေကျူပ်တို့မှာရှိသေးတယ်.. ဟိုဘက်မှာသွားထိုင်နေ.. မခေါ်မချင်းထမလာနဲ့´ဆိုပြီးအော်တာလည်း ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်.. သူတို့ကိုအခွန်ဆက်သဖို့ အလုပ်ကနေ နေ့တစ်ဝက်ခွင့်ယူလာရတော့ အမြန်လုပ်ပေးပါသွားတောင်းပန်မိတာ အဟောက်ပဲခံလိုက်ရတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်.. ပေးလည်းပေးရ ဟောက်လည်းခံရဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါရဲ့ … အခွန်တန်ဖိုးကို ပြောမယ်နော်.. တစ်လကို ၁၂၀ကနေ ၁၅၀ထိ လစဉ်ကြေးပေးရပါတယ်.. လင်းလက်အဖေကတော့ တစ်လကို ၁၅၀ သွင်းရပါတယ်.. ဒီနေရာမှာ တစ်ချို့သောမြန်မာကျောင်းသားတွေကလည်း လူလည်ကျပါတယ်.. ကျောင်းပြီးချိန်မှာ အလုပ်ထဲဝင်တော့ လစာကိုလိမ်တင်ကြတယ်.. နောက် ၁၀%ကိုပဲ သွင်းရတော့ သက်သာတာပေါ့.. အဲဒါမျိုးဆို နအဖကိုအမြင်ကတ်လို့အားပေးပါတယ်… လင်းတို့သွင်းလိုက်တဲ့အခွန်က လက်နက်နဲ့ သူတို့သက်ဆိုးရှည်ဖို့သက်သက် ပေးရတာဆိုတော့ တစ်စက်မှမသတီပါဘူး..
ဒီနေ့ မြန်မာသံရုံးကိုမသွားချင်ပေမယ့် ကျွန်မ စိတ်ချဉ်ချဉ်နဲ့ရောက်သွားရတယ်.. ဒီတစ်ခေါက်က အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းမိသားအတွက် အဖော်လိုက်ပေးရတာဆိုတော့လည်း အားတင်းသွားလိုက်မိပါတယ်.. မြန်မာလူမျိုးဆိုတဲ့သွေးနဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် သဲတစ်ပွင့်ကနေ ကူညီရတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်.. မိမိလက်ထဲ မည်သို့သော citizen ကိုကိုင်ထားသည်ဖြစ်စေ မြန်မာဆိုတာ မြန်မာပါပဲ.. လူ့ဘ၀ဆိုတာ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်.. အဲ အခုချိန် ဘဘတို့ပြုတ်ရင်တော့ ပြန်တိုးဝင်မှာပေါ့… သူငယ်ချင်းမိသားစုကတော့ အဓိကကတော့ myanmar passport ကိုပြန်အပ်ဖို့ပါ.. အစက သူတို့မိသားစုက ကျန်ရှိသော ၂နှစ်စာအတွက် အခွန်ကို ၃၆၀၀ သွင်းလိုက်ရပါတယ်.. ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြောလိုတာက စင်ကာပူနိုင်ငံ ဥပဒေက အမေရိကတို့လို မဟုတ်ပါဘူး.. ဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါစေ singaporean ခံယူမယ်ဆိုရင် မိမိနှင့် သက်ဆိုင်သော သံရုံးမှာ passport ပြန်အပ်ရသလို လိုအပ်သော ထောက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို တောင်းပါတယ်.. အဲဒီမှာ အမြဲတမ်းစားဖို့ချောင်းနေတဲ့ နအဖကလည်း တခါတည်း ဖန်ပြီပေါ့ရှင်.. ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ကျန်ရှီနေသော အခွန်ကိုဆောင်ပြီးပါပြီ… နောက် မြန်မာပြည်ပါ့စ်ပိုကို cancel လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ အရင်ကတော့ တစ်ယောက်ကို စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀၀ တောင်းပါတယ်.. အခုတော့ လျော့သွားတယ်လို့သိရပါတယ်.. သူတို့မိသားစုဝင်ကအားလုံးပေါင်း၎ယောက်…….. သူတို့၁ယောက်ကို ၅၀၀ လောက်ပေးလိုက်ရတယ်…. အဲဒီမှာ နောက်ထပ် ၂၀၀၀ လျှောတာပဲ…… စာဖတ်သူ ယုံချင်မှယုံမယ်.. ဒါပေမယ့် ဒါက တကယ့်အဖြစ်မှန်တွေပါ.. ခြင်္သေ့ကျွန်းပေါ်က မြန်မာအစိုးရကြောင့် ခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေပါ.. အခုန ၃၆၀၀နဲ့ ၂၀၀၀ ပေးပြီးပြီ… ဇတ်လမ်းကရှင်းသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်.. ဟိုဘက်မှာလည်း စင်ကာပူအိုင်စီထုတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သတ်တာမှန်သမျှ ပြန်လည်းအပ်မယ်လုပ်ရော ကျေးဇူးကြီးလှ မိနဲ့ဖ အဲ ဟုတ်ဘူး ကျေးဇူးကြီးလှမြန်မာသံရုံးက ဘာပြောတယ်ထင်သလည်း.. `နိုင်ငံသား ခံယူမယ့်မိသားစုဝင်ထဲမှာ ကလေးတွေက အသက်၁၈နှစ်ကျော်နေခဲ့ရင် ၂၁၆၀ပေးရမယ်တဲ့´ .. ကျွန်မလည်း မျက်လုံးပါ ပြူးသွားတာပဲ.. ဘယ်တုန်းကဥပဒေလည်း အရင်ကမကြားဖူးပါဘူးဆိုတော့ ဒါဥပဒေအသစ်တဲ့.. သြော် အရင်လက တစ်မျိုး အခုကတစ်မျိုး.. တယ်ကောင်းတဲ့ဥပဒေပဲ..ပြောင်းလိုက်တာလည်း ဒုံးပျံထက်တောင် ပိုမြန်သေး.. သိတောင်မသိလိုက်ဘူး.. အစက လာပြီးအ၇င်ပိုက်ဆံတွေလာပေးတုန်းက သူတို့ရှင်းပြတုန်းက ဒါတွေမပါခဲ့ပါဘူး.. အခုမှ ကျွန်မသူငယ်ချင်းက ၁၈နှစ်ကျော်ရုံလေးဆိုတော့ တစ်လကို ဒေါ်လာ၉၀နှုန်းနဲ့ ၂နှစ်စာ တောင်းတာပါတဲ့… ဘာအတွက်တောင်းတာလည်းဆိုတော့ အသက်၁၈ဆို အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်တဲ့.. သြော် ငါတို့အသက်၁၈နှစ်ကျော်ရင် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရပြီဆိုပြီး သူတို့သတ်မှတ် ၊ အလုပ်မလုပ်ရင်တောင် အခွန်ကအလိုလိုတက်နေပါလားနော်.. သူငယ်ချင်းမိသားစုလည်း အတော်အံ့သြသွားသလို ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်.. သူတို့လည်း အခွန်ကို မတတ်နိုင်တော့လို့ မြန်မာနို်င်ငံသားကို cancel လုပ်မိပါတယ်.. နောက်ဆုံးအကြိမ်ဆိုပြီး သွင်းလိုက်ရတာ အကြွေးနဲ့တင် လည်ပင်းတစ်နေပါပြီ.. တစ်လတစ်လ အလုပ်လုပ်ပြီးရသမျှအားလုံး အခွန်ဆက်သ ၊ နောက် ဘာမှလည်းအကျိုးရှိတာအတွက်သုံးတာမဟုတ်တော့ ဘယ်သူကပေးပျော်မှာလည်းရှင်…. အဲဒါ ကျွန်မဒီနေ့စိတ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းပါပဲ..
ခြင်္သေ့ကျွန်းအစိုးရရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ အရင်းရှင်စနစ် ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ အာဏာရှင်စနစ် ၊ အဲဒီ ၂ခုကြားမှာ ကန့်လန့်ခံပြီး ဒုက္ခရောက်ကြတာပါ. များပြားလွန်းတဲ့အခွန်တွေအတွက် အားလုံးက အကြွေးနဲ့မကင်းသလို နှစ်ကုန်ရင် အကုန်တက်တက်ပြောင်တာပါပဲ… မိမိနိုင်ငံအတွက် အခွန်ဆိုတာ ရှိသင့်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မတရားများလွန်းတဲ့အပြင် ထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်နေတဲ့ ဥပဒေတွေကြား အခွန်ဆောင်နေရတဲ့ ပြည်ပကမြန်မာအားလုံး ဒီတစ်သက်နှာခေါင်းဖော်ပြီး အသက်ရှုခွင့်တောင် ရပါ့အုန်းမလား စစ်အာဏာရှင်ရယ်.. Like this:Like Loading...